. * . * . ကွယျတစငျး . * . * .: June 2009
ရေးသားသူ moekhar at 6/25/2009 12:31:00 PM 31 comments:
နောက်ကြောင်း ပြန်လှည့်လိုက်ဦးမယ် ..း)
ကျန်ခဲ့တဲ့ တပတ် သောကြာနေ့က မိုးခါးတို့ရုံးခန်းပြောင်းတယ် .. 12-6-09 နေ့ကပေါ့ .. အစက ဆိုက်က Punggol မှာ .. အဲဒီကရုံးခန်းနေရာက ဖျက်ရမယ်ဆိုတော့ တခြားနေရာကို ရှာရင်း Kovan ကို ရောက်သွားပါတယ် .. သောကြာနေ့ကတော့ ပစ္စည်းတွေ သိမ်းဆည်းရွေ့ နေရာချပေါ့ .. ခုရုံးခန်းလေးက တော်တော်ကျဉ်းပါတယ် .. လူလည်း ၇ယောက်ပဲ .. ကျဉ်းတော့ မိုးခါးအတွက် ပြသနာကသိပြီးကြတဲ့အတိုင်း လူကြီး ၃ယောက်ရှေ့ရောက်နေတာပါ .. ခုဒီတပတ်ကတော့ ၁ယောက်က leave ယူထားတာ ပြန်မလာသေးဘူး .. နောက် တနင်္လာဆိုလာပြီ ..း(
သောကြာနေ့ကတော့ ပစ္စည်းတွေ ရွှေ့ဟယ် ပြောင်းဟယ်ပေါ့ .. စနေကတော့ ပိတ်တယ် .. bird park ကိုရောက်သေးတယ်လေ .. တခုမဟုတ် တခုလောက်ဖြစ်ရမှကျေနပ်တတ်တာဆိုတော့ အိမ်ကထွက်ထွက်ချင်း ဘတ်စ်ကားဂိတ်နားမှာ ချော်လဲပါတယ် .. မိုးကရွာတယ်လေ .. ဖိနပ်က အသစ် .. ပဲထုတ်ပြီးသွားတာ ချော်လဲရော .. ထီးလည်းကျိုးတယ် .. ကံမကောင်းပုံများ .. ထူမယ့်လူလည်းမရှိ တယောက်တည်း .. :P
သွားတဲ့နေရာရောက်တော့ တာဝန်က သူတို့လုပ်တဲ့ပွဲကို လာတဲ့လူတွေကို လမ်းညွှန်ပေးရမယ်တဲ့ .. သိဘူးလေ .. ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ .. အဲဒါနဲ့ ရင်ဘတ်မှာ တံဆိပ်ကပ်ထားတဲ့လူတွေကိုတော့ တိုးတိုး တိုးတိုး လိုက်ပြောတယ် .. :P ဟိုဘက်ပါ ဒီဘက်ပါပေါ့ .. နောက်တော့ ခေါင်းဆောင်ကရောက်လာတယ် .. အော်လိုက်တာ .. သူက ယောကျားလေးဆိုတော့ အသံက ကျယ်တယ်လေ .. "Blood Donar this way pls" ဆိုပြီးအော်ရော .. သြော် .. ဒီတော့မှ သိတယ် .. ဒီလိုလုပ်ရပါလားပေါ့ .. ဒါနဲ့ သူလုပ်သလိုလိုက်လုပ် .. လိုက်အော်ရတာပေါ့ .. ပထမပိုင်းက တော်တော်အော်နိုင်တယ် :D .. နောက် ရေတဗူးလည်းကုန် .. အော်နိုင်တော့ဘူး .. လည်ချောင်းတွေ နာလာရော .. ဒါနဲ့ နေ့လည်ကျ မှိန်းနေလိုက်တယ် .. :P .. မနက်ပိုင်းပဲယူထားတော့ နေ့လည်ကျ ပြန်လစ်တယ်လေ .. အတွေ့အကြုံတော့ရတာပေါ့ .. သူတို့ဘာလုပ်လဲ သိသွားတာပေါ့ ..
တနင်္ဂနွေကတော့ ထုံးစံအတိုင်း ဟိုလုပ်ဒီလုပ်နဲ့ တရက်ကုန်ရော ..
တနင်္လာရုံးပြန်တက်တော့ မဖောက်ရသေးတဲ့ ဗူးတွေဖောက် .. ပစ္စည်းတွေ နေရာချ .. နေ့လည်လောက်ကျတော့ အင်တာနက်ကရပြီ .. ဒါပေမယ့် မတက်နိုင် .. (ခုတောင် ခေါင်သူကြီးဆိုက်ထဲသွားလို့ ဘလော့ဂင်းနိုင်တာ .. ပန်ပန်ရေ ငါထပ်ပြောတော့ ဘာဖြစ်လဲ :P)
ဒီမနက်လည်း ကိုယ်က ကော်ရရှင်တိပ် လိုချင်လို့ အနောက်ခန်းထဲသွားယူတယ် .. တခါတည်းဖောက်ပြီး အမှိုက်ပစ်ခဲ့မယ်ပေါ့ .. ဖောက်နေတာ .. လူဝင်လာတော့ တူတူအလုပ်လုပ်တဲ့ မြန်မာအကိုကြီးထင်လို့ မော့မကြည့်ပဲစကားလှမ်းပြောတာ ခေါင်သူကြီးဖြစ်နေတယ် .. သူက ဟင် တဲ့ .. ဒီတော့မှကြည့်တော့ ခေါင်သူကြီး .. ဒီတော့ ဟီးဟီးပေါ့ .. ငါလူမှားသွားတယ်ပြောရတယ် .. :P
တခါလည်းဖြစ်ပြီးပြီ .. ကိုယ်က ပရင့်ထုတ်မလို့ .. ပြင်နေတာ word မှာ .. စာတွေကို adjust လုပ်နေတာ .. ယောင်ပြီး ပရင့်ကိုနှိပ်မိရော .. စာတွေက ၀ရော ၀ရောနဲ့ ထွက်လာရော .. ဒီချိန်မှာပဲ ခေါင်သူကြီးကလည်း ပရင့်ထုတ်တယ် .. သေရော .. ခိုးလုပ်တာ မိတာပဲ .. :P .. ဘာတွေလဲတဲ့ .. အော်တိုကဒ်လေ့ကျင့်ခန်းတွေလို့ .. မြန်မာလိုရေးထားတာလို့ .. လျှောက်ပြောရတယ် ..း( .. ကိုသပသ စာတွေပေါ့ .. စွန့်စွန့်စားစားကိုထုတ်လိုက်ရတယ် .. တိုးလည်းတိုးတတ်ပါတယ် .. :P
ခုလည်းလာပြန်ပြီ .. ရုံးခန်းက ၈ထပ်မှာ .. ရုံးခန်းတွေချည်းပဲ .. သူတို့အကုန် စနေဆို ပိတ်တယ် .. မိုးခါးတို့က တပတ်ခြား စနေ အိုတီဆင်းရတယ်လေ .. ဒီတပတ်မိုးခါးအလှည့် .. စနေအိုတီလာရင် တတိုက်လုံး မိုးခါးတယောက်တည်းနေရမှာတဲ့ .. အစတည်းက သရဲမကြောက်တတ်ဘူးဆိုတော့ ..း( .. မသွားဘူး ဆုံးဖြတ်ထားတယ် .. လာရင် တီချမ်းက ဒေါ်နွေးကို လွှတ်ဦးမှာ .. :P
ခုတလော စင်ကာပူမှာနေကြတဲ့ ဘလော့ရေးသူတွေ ကံနိမ့်နေတယ်ထင်တယ် .. ဟိုကကြားလဲ ကွဲပြန်ပြီ .. ဒီက ကြားလဲကွဲပြန်ပြီ .. တခုခုတော့ တခုခုပဲ .. ကံမြင့်အောင် ယတြာခြေမှထင်တယ် .. အားလုံးနဲ့ ချစ်သူတွေနဲ့ ပြတ်ကြဆဲကြ .. (ပြတ်တာတော့ဟုတ်ပါပြီ .. ဆဲတာဘာလဲလို့တော့ ကပ်သပ်မမေးနဲ့နော် .. သူများတွေသုံးသလိုပဲ သုံးလိုက်တာ .. :D) ယတြာကောင်းရင် မင်းလောင်းတောင် ဖြစ်တယ်မှုတ်လား .. :P
ကိုလူထွင်းကြီးလွှတ်လိုက်တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်လားတော့မသိဘူး .. စင်ကာပူက ဘလော့ရေးသူတွေ အထိနာနေကြတယ် .. ဒါတောင် လေပဲရှိသေးတယ် .. :P ..
ဒါနဲ့ စကားမစပ် ဒီနေ့မနက်က မေလေးနဲ့စကားပြောဖြစ်တယ် .. ဟဲဟဲ ခေါင်းစဉ်ကတော့ ယောကျာ်းလေးတွေမကောင်းကြောင်း .. :P .. ဒါနဲ့အပျိုကြီးလုပ်ကြမယ်လို့ လောလောဆယ်ပြောထားတယ် .. အတည်တော့မပြုရသေးဘူး .. ဒါက အခြေအနေအရပေါ့နော် .. :D ..
ခု အခြေအနေပေးလို့ ရေးချင်ရာရေးပြီး တင်လိုက်ပါတယ် ..း)) .. သည်းခံဖတ်ကြပါကုန် .. မရေးစေချင်ရင်တော့ ခေါင်သူကြီးဆိုက်ထဲမသွားပါစေနဲ့ ဆုတောင်းကြပါကုန် .. :P
ရေးသားသူ moekhar at 6/19/2009 02:32:00 PM 29 comments:
ရေးသားသူ moekhar at 6/18/2009 10:01:00 PM 25 comments:
ရေးသားသူ moekhar at 6/18/2009 11:05:00 AM 20 comments:
အရာရာကို ပေါ့ပျက်ပျက် ခံစားတတ်လာတယ်
ငါ .. ရိုးရိုးလေးပဲကြည့်မယ်
သောကြာနေ့က ရုံးခန်းအသစ်ပြောင်းပါတယ် .. ရုံးခန်းက ကျဉ်းတဲ့အပြင် နောက်တည့်တည့်မှာ လူကြီးသုံးယောက် စီထိုင်ပါတယ် .. ဘေးနားကပ်ရပ်မှာလဲ လူလေးတယောက်ပါ .. ခုတော့ သူတို့ဆိုက်သွားတုန်း အလစ်မှာ ခိုးပြီး ဘလော့ဂင်းလိုက်တယ် .. ၀ါသနာကိုး .. :D
ရေးသားသူ moekhar at 6/17/2009 01:07:00 PM 24 comments:
ရေးသားသူ moekhar at 6/14/2009 04:58:00 PM 29 comments:
ရေးသားသူ moekhar at 6/13/2009 10:34:00 PM 25 comments:
ရေးသားသူ moekhar at 6/09/2009 02:51:00 PM 26 comments:
ရေးသားသူ moekhar at 6/05/2009 05:33:00 PM 32 comments:
ရေးသားသူ moekhar at 6/04/2009 11:32:00 AM 29 comments:
ရေးသားသူ moekhar at 6/02/2009 08:56:00 AM 28 comments: